Ch 9 Mark – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Marka / Ch 9 Mark
9:1 Ary nony afaka henemana,, Jesosy dia naka an'i Petera, ary James, sy Jaona; Ary Jesosy nitondra azy nitokana teny an-tampon'ny tendrombohitra ihany; Dia niova tarehy teo anatrehany Izy.
9:2 Ary nanjary namirapiratra ny hoditry ny fitafiana sy ny fotsy toy ny oram-panala indrindra, toy ny famirapiratana toy ny tsy misy mpamotsy lamba ambonin'ny tany dia afaka ny hahazo.
9:3 Ary niseho taminy i Elia sy Mosesy; ary izy ireo niresaka tamin'i Jesosy.
9:4 Ary ho setrin'ny, Hoy Petera tamin'i Jesosy: "Master, tsara raha mitoetra eto isika. Ary aoka hanao lay telo izahay, ny anankiray ho Anao, ary ny anankiray ho an'i Mosesy, ary ny anankiray ho an'i Elia. "
9:5 Fa tsy fantany izay nolazainy. Fa izy ireo dia reraka ny tahotra.
9:6 Ary nisy rahona niseho nanarona azy ireo. Ary nisy feo avy tao amin'ny rahona, nanao hoe:: "Ity no Zanako malalako indrindra Zanaka. Henoy izy. "
9:7 Ary niaraka tamin'izay dia, nijery manodidina, dia tsy nahita na iza na iza intsony, afa-tsy Jesosy irery ihany miaraka aminy.
9:8 Ary raha nidina avy teo an-tendrombohitra, Nandidy azy ireo izy tsy mba hitantara amin'ny olona izay hitany, mandra-araka ny Zanak'olona dia efa nitsangana indray tamin'ny maty.
9:9 Ary nitana ny teny ho azy ireo, milaza ny zavatra "rehefa izy no efa nitsangana tamin'ny maty" mety midika.
9:10 Ary izy ireo nanontany azy, nanao hoe:: "Ary nahoana no ny Fariseo sy ny mpanora-dalàna fa Elia tsy maintsy ho tonga aloha?"
9:11 Ary ho setrin'ny, dia hoy izy taminy: "Elia, rehefa ho tonga aloha, no hampody ny zavatra rehetra. Ary araka ny fomba izay efa nanoratana ny Zanak'olona, dia tsy maintsy hijaly mafy izy sy hohelohina.
9:12 Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe, fa efa tonga i Elia ihany koa, (sady nataon'ny olona taminy izay tiany) araka izay voasoratra momba azy. "
9:14 Ary tsy ela ny olona rehetra, nony nahita an'i Jesosy, talanjona sy nozoin 'ny tahotra, ary maika ho any aminy, dia niarahaba azy.
9:15 Ary izy nanontany azy, "Inona no iadianareo hevitra eo aminareo?"
9:16 Ary ny anankiray tamin'ny vahoaka namaly tamin'ny hoe:: "Mpampianatra, Nentiko ho anao zanako, manao azy ho azom-panahy moana.
9:17 Ary na oviana na oviana fa mitaky mahazo azy, dia ampihinjitrinjiriny azy, ary mandoa vory, ary gnashes ny nify, ka dia tsy nahatsiaro tena. Ary niteny tamin'ny mpianatrao aho mba hamoaka izany, fa tsy afany. "
9:18 Ary namaly azy ireo, hoy izy:: "Ry taranaka tsy mino, pahoviana no tsy maintsy hitoerako aminareo? Mandra-pahoviana no no iaretako anao? Ento etỳ amiko. "
9:19 Ary nitondra azy. Ary nony nahita azy, tsaina avy hatrany ny Fanahy azy. Ary rehefa natsipy tamin'ny tany, nanakodia manodidina nandoa vory.
9:20 Ary Jesosy nanontany an-drainy, "Mandra-pahoviana no izany no hanjo Azy?"Fa hoy izy:: "Mbola zazakely.
9:21 Ary matetika dia amoahany azy ho any anaty afo na any anaty rano, mba handringanana azy. Fa raha afaka manao na inona na inona ny, hanampy antsika sy handray mamindrà fo aminay. "
9:22 Fa hoy Jesosy taminy:, "Raha toa ianao ka afaka ny hino: ny zavatra rehetra dia hain'ny mino izay. "
9:23 Ary niaraka tamin'izay ny rain'ny zaza, niantso tamin'ny ranomaso, nanao hoe:: "Izaho no mino, Tompo. Ampio ny tsi-finoany. "
9:24 Ary Jesosy, nony nahita ny vahoaka niara-nihazakazaka, dia nananatra ny fanahy maloto, nanao taminy hoe:, "Marenina sy moana fanahy, Andidiako anao, avelao izy; ary aza miditra ao aminy intsony. "
9:25 Ary niantso, dia nampifanintontsintona ny tenan'ilay marary azy indrindra, dia nandao Azy. Ary dia tonga toy izay efa maty, ka be dia nataon'ny maro hoe:, "Izy no maty."
9:26 Fa Jesosy, nandray azy izy, nanainga azy. Dia nitsangana.
9:27 Ary rehefa niditra tao an-trano, ny mpianany nanontany Azy mangingina, "Nahoana no tsy afaka izahay mba hamoaka?"
9:28 Ary hoy Izy taminy:, "Iny karazana iny dia afaka ny ho voaroaka na amin'inona na hafa ankoatra ny vavaka sy ny fifadian-kanina."
9:29 Sy mametraka nivoaka avy tany, dia nandeha namaky an'i Galilia. Ary nikasa hoe tsy misy mahalala ny momba izany.
9:30 Dia nampianatra ny mpianany, ary hoy izy taminy, "Fa ny Zanak'olona dia hatolotra eo an-tànan'ny olona, ka hovonoiny izy, ary rehefa voavono, amin'ny andro fahatelo dia hitsangana Izy. "
9:31 Fa izy ireo tsy mahatakatra ny teny. Ka dia natahotra ny hanontany azy izy.
9:32 Ary nankany Kapernaomy. Ary raha mbola tany an-trano, dia nanontany azy, "Inona no miresaka teny an-dalana?"
9:33 Fa tsy nahateny. Fa tokoa, eny an-dàlana, efa niady hevitra ny amin'ny izay anankiray eo aminy dia be lavitra.
9:34 Ary nipetraka teo, dia niantso ny roa ambin'ny folo lahy, ary hoy izy taminy, "Raha misy te ho voalohany, dia ho ny farany amin'ny rehetra sy hanompo ny rehetra izy ny. "
9:35 Ary nandray zaza, dia nametraka azy teo afovoany. Ary rehefa namihina azy, dia hoy izy taminy:
9:36 "Na zovy na zovy no mandray zaza iray tahaka itony amin'ny anarako, dia mandray Ahy. Ary na iza na iza mandray Ahy, tsy mandray ahy, fa Izay naniraka Ahy. "
9:37 Jaona namaly azy hoe:, "Mpampianatra, izahay nahita anankiray namoaka demonia tamin'ny anaranao; dia tsy nanaraka antsika, Ary toy izany no voarara izy. "
9:38 Fa i Jesoa nanao hoe:: "Aza mandrara azy. Fa tsy misy olona izay afaka manao amin'ny hatsaran-toetra amin 'ny anarako, ary tsy ela dia miteny ratsy ahy.
9:39 Fa izay tsy manohitra anareo dia momba anareo.
9:40 Fa na iza na iza, amin 'ny anarako, no hanome anareo rano eran'ny kapoaka hosotroina, satria an'i Kristy: Amen Lazaiko aminareo, dia tsy ho very ny valim-pitiany.
9:41 Ary na iza na iza no ho izay nanafintohina na iray aza amin'ireo madinika mino Ahy: fa ho tsara kokoa ho azy, raha lehibe fikosoham-bary no napetraka manodidina ny vozony, ka atsipy any an-dranomasina.
9:42 Ary raha ny tananao no manafintohina anao amin'ny ota, tapaho: fa tsara ho anao ny hiditra kilemaina any amin'ny fiainana, noho ny manana tanana roa any amin'ny helo, ho any amin'ny afo tsy mety maty,
9:43 any ny kankany tsy maty, ary ny afo tsy maty.
9:44 Fa raha ny tongotrao no manafintohina anao amin'ny ota, mitetika azy eny: fa tsara ho anao ny hiditra mandringa any amin'ny fiainana mandrakizay, noho ny manana tongotra roa, nefa hariana any amin'ny helo ny afo tsy mety maty,
9:45 any ny kankany tsy maty, ary ny afo tsy maty.
9:46 Fa raha ny masonao no manafintohina anao amin'ny ota, esory hiala: fa tsara ho anao ny hiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia niara-maso, noho ny manana maso roa, nefa hariana any amin'ny helo mirehitra afo,
9:47 any ny kankany tsy maty, ary ny afo tsy maty.
9:48 Fa ho sira amin'ny afo, ary ny niharam-boina ho sira sira.
9:49 Koa tsara ny sira: fa raha ny fanasina no tonga Bland, amin'ny inona no hataonareo fotoana izany? Aoka hisy sira ao anatinareo, ary fiadanana ho eo aminareo. "